Umfoti uJames Mollison kwincwadi yakhe ubonisa apho abantwana balala khona emhlabeni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UYesu Arjona Montalvo | | Ukufota
Umfoti weNgesi UJames mollison Ndihambahamba ehlabathini lonke ukufota abantwana kunye namagumbi abo okulala. Imifanekiso eqingqiweyo yapapashwa kwincwadi yakhe enesihloko 'Apho Balala Abantwana', 'Apho Balala Abantwana', apho atyhila iyantlukwano eyothusayo kuwo onke amazwe, ukusuka kumantombazana anxibe iilokhwe ezixabisa amawaka eedola kwizindlu zabo zabucala, kumakhwenkwe alala neebhokhwe. ISAZISO: Eminye imifanekiso isenokuba rhabaxa.
Ndiyathemba ukuba incwadi ngokujonga nje kubafundi, ukusuka kubomi babanye abantwana bahlala kwiimeko ezahlukeneyo kwihlabathi liphela; Ithuba lokucinga ngokungalingani okukhoyo, kunye nokuqonda ukuba injani na imeko yethu kwilizwe eliphuhlileyo, utshilo uJames.
UJames Mollison wazalelwa eKenya ngo-1973 y Ukhulele e-england. Emva kokufunda ubuGcisa noYilo kwiYunivesithi yaseOxford, ukuwu- kunye ukufotowa Kamva eNewport kwiSikolo soBugcisa kunye noYilo, kamva wafudukela e-Italiya ukuya kusebenza kwilabhoratri yoyilo Benetton. Ukusukela nge-Agasti ka-2011 uMollison ebesebenza njengomhleli wephephancwadi. 'Imibala' kunye noPatrick Waterhouse.
Ngo-2009 waphumelela imbasa ye 'Odden Vic' kwiRoyal Photographic Society, impumelelo iyamangalisa kubugcisa bokufota ngokuba ngumfoti wase-Bhritane oneminyaka engama-35 nangaphantsi. Umsebenzi wakhe upapashwe ngokubanzi kwihlabathi liphela, kubandakanya 'INew York Times Magazine', IMagazini 'Umgcini', Uphengululo lweParis, 'GQ', 'Imagazini yaseNew York' y 'Le Monde'. Incwadi yakhe yabantwana yamva nje yapapashwa ngo-Epreli ka-2015, uthotho lwezixhobo ezenziwe ngamaxesha okwenzeka ngexesha lokuphumla, uhlobo lweefoto zamakhefu.
Igumbi lakhe 'Apho Balala Abantwana' yashicilelwa ngo-Novemba ngo-2010, ibalisa amabali abantwana abahlukeneyo abavela kwihlabathi liphela Imizobo kunye neefoto zamagumbi abo okulala. Incwadi yakhe yesithathu, Abafundi, yapapashwa ngo-2008.
Ngo-2007 wapapasha 'Inkumbulo kaPablo Escobar', ibali elingaqhelekanga le-narco esisityebi kunye nobundlobongela kwimbali "Kubalwe ngamakhulu efoto eqokelelwe nguMollison". Yayilulandelelo lomsebenzi wakhe kwiinkawu ezinkulu, ezijongwa ngokubanzi njengomboniso obandakanywayo 'Imbali yeMbali yeMbali yaseLondon'. Apha sikubonisa isiqwenga esinye udliwano ndlebe Benze ntoni ngale ncwadi siyikhankanye ngasentla.
Ubafumene njani abantwana bezithombe? Unxibelelane njani nabo?
Wayeneendlela ezahlukeneyo zokusebenza. Kwiindawo ezinje ngeNepal, iTshayina kunye neWest Bank, ndisebenze no'Gcina abantwana 'abandincedayo ndafikelela, kodwa ndaye ndaziva kubalulekile ukuba ndithathe iifoto zabantwana ngaphandle kwehlabathi, kwaye ndasebenza nomvelisi walapha. Ndisebenze nakwamanye amazwe afana neBrazil, Japan kunye neMelika.
Ngaba oku kubonakala ngathi ngumsonto obaleka kuwo wonke umsebenzi wakho njengomfoti?
Ewe iyenza. Iiprojekthi zam zihlala ziqala ekujongeni ukuba kamva ndizame ukubhekisa kuzo kwiifoto. Phantse uhlala ujikeleze uthotho lwemifanekiso; Iifoto ezizodwa, ngelixa zibalulekile, azinamsebenzi kangako.
Ngaba ungasibalisela ibali malunga nabantwana oqaqambe ngokukodwa oye wadibana nabo kuhambo lwakho?
Ngokwezinto ezibaxekileyo phakathi kwabantwana ababini, ezazizakuba phakathi kukaJaime, endamfota kwigumbi lakhe eliphezulu kumgangatho wesihlanu kwiNew York, noLehlohonolo owayehlala eLesotho, eMzantsi Afrika. UJamie wayexakeke kakhulu sisikolo, kwaye eneshedyuli exakekileyo yemisebenzi yasemva kwesikolo enje ngeJudo, izifundo zokudada, ibhola ekhatywayo, njl. Wayekuthanda nokufunda iimali zakhe kwiwebhusayithi yeCitibank.
U-Lehlohonolo wayehlala nabantakwabo abathathu, ababeziinkedama ezine-AIDS. Abantwana babehlala kwindlwana yodaka apho babelala kunye phantsi, begonene ukuze bafudumale ngexesha lasebusuku elibandayo lasebusika. Abakhuluwa bakaLehlohonolo bahamba ngeenyawo ukuya esikolweni esikumgama oziikhilomitha ezintlanu, nalapho kunikwa ukutya kwanyanga zonke okufana neenkozo, iimbotyi neoyile. Abazange bakhumbule ixesha lokugqibela lokutya inyama. Ngelishwa, kunokwenzeka ukuba bahlala kwintlupheko ubomi babo bonke kuba izityalo kunzima ukuzikhulisa kumhlaba ongachumanga, kwaye akukho themba lomsebenzi.
Amaxwebhu efoto asichaphazela njani isiqinisekiso kunye nokukhuselwa kwamalungelo oluntu?
Ndicinga ukuba kwenzeka ntoni eSyria ngoku ngumzekelo onomdla. Abantu basebenzisa iifowuni eziphathwayo ukurekhoda inkohlakalo eyenzekayo, kwaye oku kuyanceda ukugxila ezingqondweni zabantu kwaye zigcine kumajelo eendaba. Xa, kwiminyaka engama-20 eyadlulayo, utata ka-Assad wayecinezele imvukelo ngokubulala amawaka abantu, kwakungekho maxwebhu maninzi kwaye oku kwavunyelwa.
Iwebhusayithi: ehleliso | Incwadi: 'Apho Balala Abantwana'
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Umfoti uJames Mollison kwincwadi yakhe ubonisa apho abantwana balala khona emhlabeni
Izidalwa ezinemibala ezihlala kwincwadi yokubhalela iAnna Bucciarelli Studio